ဆုံဆို့ရောဂါကာကွယ်ဆေး - ဝီကီပီးဒီးယား
ဆုံဆို့ရောဂါကာကွယ်ဆေး (အင်္ဂလိပ်: Diphtheria vaccine) သည် ဆုံဆို့ရောဂါဖြစ်ပွားစေသော ကော်လီနီဘက်တီးရီးယမ်း ဒစ်ဖ်သီးရီးရေး Corynebacterium diphtheriae (English) ဟုခေါ်သော ဘက်တီးရီးယားကို ကာကွယ်ပေးသည့် ကာကွယ်ဆေးတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ (၁၉၈၀)မှ (၂၀ဝ၀)ခုနှစ်အတွင်း ဤကာကွယ်ဆေးကို အသုံးပြုခဲ့ခြင်းဖြင့် ကမ္ဘာတလွှမ်းတွင် ဆုံဆို့ရောဂါဖြစ်ပွားသူများ (၉၀)ရာခိုင်နှုန်းအထက် ကျဆင်းခဲ့သည်။ ဤကာကွယ်ဆေးကို ကနဦးအနေဖြင့် (၃)ကြိမ်ထိုးရန် အကြံပြုထားပြီး (၃)ကြိမ်ထိုးပြီးလျှင် (၉၅)ရာခိုင်နှုန်းခန့်ကို (၁၀)နှစ်ကြာ ကာကွယ်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် နောက်(၁၀)နှစ်ခန့်ကြာလျှင် အပိုဆောင်းတစ်ကြိမ်ထပ်ထိုးရန် လိုအပ်သည်။ ကလေးအသက်(၆)ပတ်ခန့်တွင် ပထမဆုံးအကြိမ် ကာကွယ်ဆေးထိုးရန်လိုအပ်ပြီး ဒုတိယနှင့် တတိယအကြိမ်ကို နောက်ထပ်(၄)ပတ်စီခြား၍ ထိုးရသည်။
ဆုံဆို့ရောဂါကာကွယ်ဆေးသည် အလွန်စိတ်ချရသော ကာကွယ်ဆေးဖြစ်သည်။ သိသာထင်ရှားစွာဖြစ်သော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများဖြစ်လေ့မရှိပါ။ ဆေးထိုးသောနေရာတွင် နာကျဉ်ခြင်းဖြစ်တတ်သည်။ ဆေးထိုးသည့်နေရာတွင် အဖုလေးဖြစ်တတ်သော်လည်း ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာတွင် ပျောက်သွားတတ်သည်။  ဤကာကွယ်ဆေးကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေသူများနှင့် ကိုယ်ခံအားကျဆင်းနေသူများတွင်ပါ စိတ်ချစွာ အသုံးပြုနိုင်သည်။
ဆုံဆို့ရောဂါကာကွယ်ရန်အတွက် ရောစပ်ထားသောကာကွယ်ဆေးမျိုးစုံရှိသည်။ ၎င်းတို့မှာ မေးခိုင်ရောဂါကာကွယ်ဆေးနှင့် ရောစပ်ထားသော နှစ်မျိုးစပ်ကာကွယ်ဆေး (dT or DT)နှင့် မေးခိုင်၊ ကြက်ညှာကာကွယ်ဆေးများနှင့် ရောစပ်ထားသော သုံးမျိုးစပ်ကာကွယ်ဆေး (DPT) တို့ဖြစ်သည်။ ဤကာကွယ်ဆေးကိုအသုံးပြုရန် ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့မှ (၁၉၇၄)ခုနှစ်တွင် အကြံပြုခဲ့သည်။ ကမ္ဘာတဝှမ်းတွင်ရှိ လူပေါင်း(၈၄)ရာခိုင်နှုန်းခန့်ကို ဤကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးဖြစ်သည်။ ဤကာကွယ်ဆေးကို ကြွက်သားအတွင်းသို့ ထိုးနှံရသည်။ ဤကာကွယ်ဆေးကို အအေးခံ၍ သိမ်းဆည်းထားရသော်လည်း အရည်ခဲအောင် သိမ်းဆည်းရန်မလိုပါ။
ဆုံဆို့ရောဂါကာကွယ်ဆေးကို (၁၉၂၃)ခုနှစ်တွင် စတင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့မှ သတ်မှတ်ထားသည့် အခြေခံကျန်းမာရေးစနစ်အတွက် အဓိကလိုအပ်သောဆေးများထဲတွင် တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်သည်။ (၂၀၁၄)ခုနှစ်အရ နှစ်မျိုးစပ်ကာကွယ်ဆေး၏ လက်ကားဈေးနှုန်းမှာ (ဝ.၁၂-ဝ.၉၉) ဒေါ်လာဖြစ်သည်။ အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် (၂၅)ဒေါ်လာအောက်ခန့် ပေးရသည်။
↑ MedlinePlus Medical Encyclopedia: Diphtheria immunization (vaccine)။ March 2, 2009 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2009-03-07 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၂.၀ ၂.၁ ၂.၂ ၂.၃ ၂.၄ ၂.၅ ၂.၆ ၂.၇ ၂.၈ ၂.၉ "Diphtheria vaccine" (Jan 20, 2006). Wkly Epidemiol Rec 81 (3): 24–32. PMID 16671240.
↑ ၃.၀ ၃.၁ ၃.၂ Atkinson၊ William (May 2012)။ Diphtheria Epidemiology and Prevention of Vaccine-Preventable Diseases (12 ed.)။ Public Health Foundation။ pp. 215–230။ ISBN 9780983263135။
↑ Diphtheria Vaccination။ Department of Health and Human Services။ 8 November 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Diphtheria (3 September 2014)။ 27 March 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Vaccine, Diphtheria-Tetanus။6December 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Hamilton၊ Richart (2015)။ Tarascon Pocket Pharmacopoeia 2015 Deluxe Lab-Coat Edition။ Jones & Bartlett Learning။ p. 313။ ISBN 9781284057560။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဆုံဆို့ရောဂါကာကွယ်ဆေး&oldid=288761" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၄ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၆၊ ၀၈:၅၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။